Yini Emisa Izinhlangano Ekusebenziseni Amasu Okuthengisa Komphakathi? | Martech Zone
Yini Emisa Izinhlangano Ekusebenziseni Amasu Okuthengisa Komphakathi?
NgoLwesithathu, uDisemba 30, 2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Njengoba singena ku-2016, izinhlangano zisalwela neyazo ukuthengisa komphakathi amasu. Sabelane nge izisekelo zokuthengisa komphakathi kokuthunyelwe kwangaphambilini futhi akunakuphikwa izinzuzo zethimba elisebenzisa imikhuba yokuthengisa komphakathi:
Ama-61% ezinhlangano ezibandakanyeka ekuthengiseni komphakathi zibika umthelela omuhle ekukhuleni kwemali engenayo, engaphezu kuka-20% ngaphezu kwabathengisi okungebona bezenhlalo!
Ngalezo zinhlobo zezibalo, ungacabanga ukuthi zonke izinhlangano zizobe zisebenzisa ukuthengisa komphakathi njengecebo eliyinhloko… kepha akulula kanjalo.
Ama-72% ochwepheshe bezentengiso abona sengathi abanamakhono okuthengisa emphakathini
Izinselelo ezinkulu ekutholakaleni ukuthengiswa komphakathi zitholakele emininingwaneni yocwaningo lwakamuva evela ku-Sales for Life. Ukuqeqeshwa okunganele, ukuntuleka kwesilinganiso se-ROI, kanye nokusetshenziswa okulinganiselwe kumasu okuthengisa sekuholele kumabhizinisi alwela ukusebenzisa izinhlelo. Iningi alinalo uhlelo lokuqeqesha kanye nendawo futhi cishe ikota yesithathu yabachwepheshe bokuthengisa abanamakhono wokusebenzisa isu.
Ekuqaleni konyaka, sihlanganyele i- Umhlahlandlela Wabaqalayo Wokuthengisa Komphakathi i-infographic evela ku-Salesforce. Vele, amasu akho kufanele abe nokugxila okuncane kakhulu ukukhomba izithameli zakho ezihlosiwe, wakhe igunya lakho, futhi uphambi kwemikhombandlela efanelekile.
Tags: 2016izinhlelo zokuphendulaumagazineukuthengisa impilo yonkeukuqeqeshwa kwe-sandlerukuthengisa komphakathiukuthengisa i-infographic yomphakathiukubheka phambili
Starbucks, Kungenzeka Wenza Social Better